Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Mode mugdiga ah ee iOS 13 | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Mode Dark ee iOS 13
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Mode Dark ee iOS 13
IPhone ayaa ugu dambeyntii ku biiray dhinaca mugdiga ah ee cusub ee qaabka mugdiga ah ee lagu soo bandhigay iOS 13. Apple ayaa ka farxiyay taageerayaasha kuwaas oo ku qaylinayay muuqaalka sanado badan - waxayna u muuqataa in sugitaanku uu u qalmay.
Ka dib markii la isticmaalo Mode mugdiga, uma maleynayo inaan dib ugu laaban doono is dhexgalka cad ee macruufka ah mar dhow. Apple waxay ku shubtay fikrado farabadan Mode mugdiga si ay u sameyso wax ka badan kaliya inay wax walba madow ka dhigaan.
Habka mugdiga ah wuxuu la wareegayaa pixel kasta oo ka mid ah shaashadda iPhone iyo iPad oo leh nidaam midab madow oo qurux badan. Waxay ku habboon tahay bay'adaha iftiinka hooseeya. Intaa waxaa dheer, way ku fududahay indhahaaga.
Apple aad buu u jecel yahay Habka Madow sidaa darteed hal sawir oo ku yaal iOS 13 boggiisa horudhaca waa mugdi. Dhammaan cusbooneysiinta software-yada kale waxay leeyihiin bogag aad u iftiimaya. Baahnayn in la yiraahdo, Mode mugdiga ah ayaa laga yaabaa inuu noqdo midka ugu weyn ee iPhone cusub ee 2019. Waxaa jira dhowr farsamooyin oo ay tahay inaad ogaato isticmaalka, inkastoo.
Daarida Habka Madow ee iOS 13
Habka mugdiga u rogo xarunta kantaroolka! pic.twitter.com/FtG7tJOKJt
- Mauricio (@theloloop) Juun 4, 2019
Waxaa jira laba siyaabood oo lagu dhaqaajin karo Mode Dark. Marka hore, waxaad tagi kartaa Settings app, tubada Muuqaal & Iftiin kadibna dooro Dark.
Apple sidoo kale waxay ku dartay beddelka Xarunta Kontroolka, laakiin gabi ahaanba marka hore ma muuqato. Si aad u hesho beddelka Qaabka Madow, hoos u soo jiid Xarunta Kontroolka, ka dibna taabo oo hay shalbaydhka dhalaalka si aad u muujiso beddelka Habka Madow ee ku xiga Habeenka Shift iyo Tone True.
Si otomaatig ah u shid ama dami
IOS 13 waxa ku jira ikhtiyaarka ah in la shido ama damiyo Mode mugdi ah oo ku salaysan qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca. Goobtaas waxa kale oo laga heli karaa qaybta Muujinta & Iftiinka ee abka abka. Marka aad si toos ah u dejiso, gidaaradaada sidoo kale way isbedeli doonaan, markaad bedesho. Waa tafaasiil qurux badan oo la mid ah Wallpapers-ka Dynamic Apple ee lagu soo bandhigay macOS Mojave, maahan mid faahfaahsan.
Taageerada abka xisbiga saddexaad waa furaha
Weli caddaan badan oo halkan ah.
Sawirka: Buster Hein/Cult of Mac
Habka mugdiga ah wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican markaad isticmaalayso mid ka mid ah apps Apple ee iOS 13. Laakiin haddii aad isticmaalayso apps kale, waxay noqon karaan kuwo aad u dhalaalaya. Inta badan maalinteyda waxaan ku qaataa jilitaanka boggaga internetka iyo kanaalada Slack, marka shaashadda iPad-ka wali waxay u muuqataa mid aad u cad xitaa marka Mode mugdiga ah la shido.
Apple waxa ay abuurtay API kaas oo u ogolaanaya horumariyayaasha dhinac saddexaad in ay ka hirgeliyaan Mode mugdiga ah barnaamijyadooda. In badan iyo in ka badan oo devs ah ayaa samaynaya barnaamijyadooda Mode-ka-madow maalin kasta, laakiin masaafadaadu way kala duwanaan kartaa.
Sida loo isticmaalo 3D Touch menus gudaha iPadOS
Sida loo isticmaalo maamulaha soo dejinta Safari ee iOS 13